Firenena iza no notoroan'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny tsy hitsangatsangana? | Vaovao momba ny dia
Maria | | General, Tsangatsangana
Ny fahavaratra no fotoana mety indrindra handraisana io dia nantenaintsika io nandritra ny taona maro. Fialan-tsasatra izay lasa fitsangatsanganana amin'ny toerana tsy fantatra, lavitra ary exotic izay itadiavantsika fahatsiarovana tsy hay hadinoina rehefa miverina isika.
Ny fahazoana manao fialan-tsasatra tsara dia tsy hiankina amin'ny orinasa na toerana halehany voafantina fa koa amin'ny andian-javatra maromaro toy ny fahalalana ny fomba amam-panao eo an-toerana ny toerana izay hotsidihinay, ny fiadanan-tsaina ny fahafantarana fa nanao fifanarahana fiantohana momba ny dia ianao, mahafantatra ny fomba Mifandraisa amin'ny ambasadin'ny firenentsika na manamarina raha mila visa fidirana ao amin'ny firenena voafidy ianao. Raha fintinina, miezaha tsy hamela na inona na inona ho an'ny kisendrasendra izay mety hanelingelina ny fitsaharantsika amin'ny fahagaga tsy mahafinaritra.
Amin'izany heviny izany, ny Ministeran'ny raharaham-bahiny espaniola dia manavao am-pahamalinana ny tranokalany miaraka amin'ny fampahalalana izay alefan'ny masoivoho sy ny kaonsily tsindraindray. Alohan'ny handehananao any amin'izay toerananao dia tsara ny hijerena anao hahalalana ny tolo-kevitra omen'ity andrim-panjakana ity ho an'ny mpandeha alohan'ny handehanana any amin'ny firenena sasany.
Ny fitomboan'ny fandrahonana mpampihorohoro iraisampirenena ary, vokatr'izany, ny fahasimban'ny toe-draharaha fandriam-pahalemana amin'ny ankamaroan'izao tontolo izao dia nampitombo ny risika fa ny olom-pirenena tandrefana dia mety ho lasibatry ny fanafihana na fakana ankeriny. Noho izany, Ny Ministeran'ny raharaham-bahiny sy ny fiaraha-miasa dia manentana mafy ireo mpandeha mba handray fepetra, fadio ireo toe-javatra mety hampidi-doza ary misoratra anarana ao amin'ny Masoivoho na Consulate General of Spain.
1 Firenena iza no manoro hevitra anao tsy handehanana any?
2 Soso-kevitra rehefa mandeha
Raha fintinina dia kivy ny fandehanana any amin'ny firenena 21 manerantany eto Afrika, Azia ary Oseania noho ny loza aterany: Libya, Egypt, Somalia, Chad, Nigeria, Liberia, Guinea Bissau, Mauritania, Niger, Burkina Faso, Mali, Republic of Central Africa and Burundi in Africa; Afghanistan, Iraq, Iran, Lebanon, Pakistan, Korea Avaratra, ary Syria any Asia; ary Papua New Guinea any Oseania.
Io no kaontinanta izay ahitana firenena mampidi-doza indrindra mitsidika azy. Ny ankamaroan'izy ireo dia tototry ny fifanolanana na tsy filaminana ara-politika ary tsy azo antoka ny fiarovana ny mpizahatany satria atahorana ny asa fampihorohoroana, ny halatra amin'ny herisetra ary ny fakana ankeriny ny vahiny.
Soso-kevitra ihany koa ny tsy tokony hialana amin'ireo ivon-tanàna sy toerana fizahan-tany bebe kokoa ary hiarahana hatrany. Aza mivezivezy amin'ny alina mihitsy, aza mankany amin'ny fivoriambe ara-politika ary aza miala amin'ny fanazaran-tena amin'ny fandaharam-potoana sy ny dia.
Manoro hevitra ny Minisiteran'ny raharaham-bahiny mba tsy handehanana any amin'ny firenena maro amin'ity kaontinanta ity noho ny fifanolanana mitam-piadiana any amin'ny faritra na ny mety hisian'ny fanafihana mpampihorohoro. Ny ladoany eo an-toerana koa dia mety hiteraka olana raha tsy fantatra na hajaina izy ireo. Ohatra, voarara ny fanehoam-pitiavana ampahibemaso any amin'ny firenena Silamo, tsy ara-dalàna ny fiarahana miaina, ary mety hosazin'ny lalàna ny dihy ampahibemaso.
Ny minisiteran'ny raharaham-bahiny dia manoro hevitra fotsiny ny amin'ny fandehanana any Papua New Guinea ao anatin'ny Oseania. Any amin'ny firenena any amin'ny ranomasina hafa dia asaina ampahafantarina hatrany ny toetr'andro ary koa aza manakaiky ny tranom-panjakana sy ny fifantohan'ny miaramila noho ny fiovan'ny toe-draharaha politika, satria mety hisy ny herisetra.
Soso-kevitra rehefa mandeha
Fisoratana anarana ao amin'ny rejisitry ny mpitsangatsangana: Ny rezistra misahana ny fitsangatsanganana ataon'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny dia mamela ny angon-drakitra manokana momba ny mpizahatany sy ny diany mba ho voarakitra an-tsoratra ka, miaraka amin'ny antoka rehetra amin'ny tsiambaratelo, dia azo tratrarina izy ireo raha misy tranga maika.
Photocopies an'ny antontan-taratasy: Mba hisorohana ny fampitahorana raha sendra misy halatra na fatiantoka dia asaina manao photocopie marobe amin'ny antontan-taratasintsika tany am-boalohany (pasipaoro, politikan'ny fiantohana, maso ny visa, carte de crédit, visa ary carte de crédit) ary tazomy mitokana ny kopia sy ny tena izy.
Mialà fiantohana ara-pitsaboana sy fizahan-tany: Koa satria any amin'ny firenena maro, ny vidin'ny hopitaly dia zakan'ny marary ary mety ho lafo dia lafo tokoa, aroso amin'ny fiantohana ara-pitsaboana izay, raha sendra aretina na lozam-pifamoivoizana mandritra ny dia, dia miantoka ny fandrakofana feno. Ny fiantohana fitsangantsanganana dia hanampy antsika koa raha misy halatra, fatiantoka sidina na valizy.
Mitondrà fomba fandoavam-bola ampy: Soso-kevitra ny hitondra vola ampy handoavana sy hiatrehana ireo zava-misy mety hitranga mandritra ny dia, na amin'ny vola, na ny volan'ny mpandeha, na ny carte de crédit.
Hajao ny lalàna sy ny fomba amam-panao eto an-toerana: Ny hetsika izay ara-dalàna eto amin'ny firenena niaviantsika dia mety tsy ho ara-dalàna ao amin'ilay firenena alehantsika. Noho io antony io dia tsara ny manontany amin'ny antsipiriany momba ny toerana haleha. Ilaina ihany koa ny fikolokoloana akanjo satria ny akanjo sasany dia mety handratra ny fahatsapana fahatongavana ary hiteraka tsy fahatakarana tsy mahazo aina. Indrindra fa ny fivavahana dia manamarika ny fomba fiainam-bahoaka.
Fantaro ny fiteny: Na dia marina aza fa miteny anglisy ianao dia afaka mivezivezy erak'izao tontolo izao, tsy mampaninona ny mianatra fiteny vaovao. Ny fananana fahalalana farafaharatsiny amin'ny fiteny eo an-toerana dia fomba iray ifaneraserana ary azo antoka fa hankasitraka ny ezaka ny tompon-tany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Firenena iza no notoroan'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny tsy hitsangatsangana?
India: Fomba amam-panao sy fety